Wararka - Vacuum Sealers - Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Kahor Intaadan Iibsan
Mashiinka wax lagu duubo
Vacuum Sealers - Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Kahor Intaadan Iibsan
Faakiyuumka faakiyuumku waa mid ka mid ah mashiinnada jikada ee aadan fahmin inta aad isticmaali doontid - ilaa aad mid ka iibsatid. Waxaan u adeegsannaa shaanbadeyda faaruqinta ah keydinta cuntada, dhalooyinka lagu xiro iyo dhalooyinka, ilaalinta daxalka, dib-u-hagaajinta bacaha iyo u diyaar-garowga xaaladaha degdegga ah. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa faakiumkaaga faakuumka karinta sous vide. Qoraalkan, waxaan ka wada hadli doonnaa siyaabaha loo adeegsan karo shaabadeeyahaaga, waxaan sameyn doonnaa isbarbardhigga moodooyinka Cunnad-ilaaliyaha iyo astaamahooda, waxaanan la wadaagi doonnaa talooyin ku saabsan bacaha Cuntada lagu keydiyo.
SIDEE AYUU U SHAQAYSAA MAKIINADDA MAKIIMADDA SHAQAALAHA?
Mashiinnada mashiinka faakiyuumka (Vacuum sealer) waxay nuugaan hawada bacda ama weelka wayna xirmaan si aysan hawadu dib ugu soo laaban karin. iyaga. Tani waxay ka hortageysaa cuntada in la jajabiyo ama laga waayo casiirkeeda inta lagu jiro howlaha faaruqinta. Vacuum sealing waxay qabataa shaqo weyn oo ka ilaalinaysa waxyaabaha ku jira oksijiinta, dareerayaasha iyo cayayaanka.
Waa kuwan bandhig deg deg ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo qalabka wax lagu buuxiyo.
MAXAA LOO HELAYAA SAMEEye SAMEE?
Waxaan diyaariyey liis ah qaabab kala duwan oo loo isticmaalo qalabka wax lagu nadiifiyo ee guriga lagu buuxiyo si loo muujiyo sida aaladda faakiyuumku u caawin karto jikadaada iyo gurigaaga.
XULASHADA UGU DANBAYSAN EE SAMEEYA XAWADA SAMEEYA
Nidaamka Qufulka Faakiyuumka ee 'FoodSaver FM2000-FFP' oo wata Bacda Bilowga ah / Roll Set - loogu talagalay shaabadaynta boorsada oo keliya, miisaaniyad ahaan. Waxay ku habboon tahay aag yar oo wax lagu keydiyo, boorsooyin si gooni gooni ah loo kaydiyo.
Nidaamka Qufulka Vacuum ee Nidaamiyaha Fayadhowrka ee 'FoodSaver FM2435-ECR' oo ay kujirto gunno gacan qabad leh iyo Qalabka Bilowga - Mashiinka heerka dhexe ah, oo ay kujiraan keydinta boorsada iyo kuwa gacanta lagu hayo
# 1 - Kaydinta Cuntada
Waxaan u isticmaalaa shaanbadeyda faakuumka keydinta cuntada in ka badan adeegsiga kale. Qufulka Vacuum wuxuu si aad ah u dheereeyaa nolosha cuntada ee qaboojiyaha, qaboojiyaha iyo bakhaarka.
KU JOOJI FARIJIYAHA
Waligaa waligaa ma ku tuurtay boorso wax soo saar qaboojiyaha ama qaboojiyaha, adoo u maleynaya inaad si deg deg ah u isticmaali doontid sidaa darteed uma baahnid inaad wax gaar ah ku sameysid baakadka, kaliya si aad hadhow u hesho, qaboojiyaha gubtay ama caaryaysan
Waxay qaadataa ilbiriqsiyo kaliya in la nadiifiyo cuntada, iyo xirnaanshaha faakiyuumka ayaa cimriga cimriga u kordhisa cuntooyinka sanado halkii bilo laga dhigi lahaa. Faakiyuumka hilibka xiran ma aha mid oksijiye noqda oo bunni isu beddela. Waxaan had iyo jeer helnaa fayadhowrka iibsiga hilibka lo'da oo xiran.
SOO SAAR ILAALINTA SANADO BADAN BILO
Waxaan u isticmaalaa khaanadeyda faakuumka wax soo saarka cusub ee la qaboojiyey sida digir, broccoli, strawberries, basbaas, buluug, kale, chard, digir cagaaran iyo wax kasta oo kale oo aan daahir ahayn.
Waxaan jecelahay inaan ku qaboojiyo waxsoosaarka digsiyada xaashida, ka dibna aan ku rakibo bacaha / cabbirka cabbirka cabbirka oo aan xirro. Qaabkaas, markaan furayo bacaha, digirta ama berry dhammaantood kuma xirna hal guri oo barafoobay, waana ku shubi karaa wax yar ama intii aan u baahanahay hal mar. Qaboojinta alaabada jilicsan ama dareeraha sare waxay ka dhigeysaa inay noqdaan kuwo la jajabiyey oo casiir ka helayay faakiyuumka.
Waqtiga boostada: Mar-05-2021
Beitou Park Park, No.10 Keji Avenue, Yixing City, Gobolka Jiangsu
Tel: +86 18261589258